10 Xannuun Oo Qorfaha Daawo U yahay. | Arrimaha Bulshada
Home News 10 Xannuun Oo Qorfaha Daawo U yahay.
10 Xannuun Oo Qorfaha Daawo U yahay.
Thursday, September 21, 2017 News Edit
Bulsha:- Faa’iidooyinka Caafimaad Laga Helo Qorfaha ayaa waxa ay yihiin kuwa lasoo koobi Karin. Qorfaha waxaa u ka mid yahay geedaha macaanka ah oo cuntada lagu darsado
. Qorfaha ayaa ah qolofta geedka loo yaqaano Cinnamon. Waxaana uu ka mid yahay daawo dhireedka soomalida isticmalaan.
Isticmaalka Qorfaha ayaa waxaa uu leeyahay faa’iidooyin caafimaad oo aad ugu wanaagsan. Faa’iidooyinak caafimaad ayaa waxay ay yihiin kuwa lasoo xaqiijiyay.
Daawooyinka qorfaha ayaa waxa inta badan lagu sameeyaa sida saliid ahaan iyo budo daqiiq ahaan. Sida la sheegay qorfaha waxaa uu u fiican yahay daawaynta duduro badan oo manta halis ku ah nolosha da badan.
Xannuunada oo qorfaha daaweeyo ayaa waxaa ka mid ah:
1. Wadano xanuunka.
Waxaa uu ka hortagaa cudurada ku dhacaan wadnaha. Isticmaalka joogtada ah ee qorfaha waxaa uu u fiican yahay ka hortaga wadno xanuunka. Marwalbo ku darso qorfaha cunnada aad reerka u samaynaysid.
Qorfahaayaasidiisaba la leeyahaydhicaan oo la dagaalamaxannunkasonkorta.
Waxaa uu leeyahay dhicaan oo kulul kasoo loo yaqaano Antioxidant. Dhicaankaas oo qarfaha uu leeyahay ayaa waxaa uu jaraa culeyka jirka. Haddii aad doonaysid inaad culeys ika jarto waxaad isiticmashaa qorfaha shiidan.
Waxaa uu dejiyaa dhiiga kacsa. Ama dhiigaada hadduu koru u yahay. Waxaad shiidaa qorfe oo kudartaa malab. Isticmaal hal qaado iskuqaskaas oo malabka iyo qorfaha subax kasta. Waxaad dareemi doontaa inaad caafimaad heshay.
5. Xanuunada Maskaxda.
Qorfahawaxaauuuroonyahay la dagaalankacudurada ku dhacaanmaxkaxda. Cuduradayareeyaanhoos u dhacacabirkacaqliga. Waxaanawaxtar u leeyahayshaqadamaxkaxda. Waxaauukaalmeeyaafurfurnaantaiyofaxfaxnimadashaqsiga.
Shida la sheegay, qorfaha waxaa uu ka mid yahay geedaha loo isticmaali karo ka hortaga kansarka. Waxaana laga yabaa inuu daaweeyo kansarka.
7. Infekshanka iyo fayraaska.
Waxaa uu la dagaalamaa cabuuqda ama infekshanka ku dhaca jirka. Waxaa muhiim u yahay daawaynta infeshanada ku dhaca jirka gudahiisa.
Waxaauudaawo u caafimaadkailkaha. Waxaauusidoo kale loo isticmalaanadiifintailkaha oo qeybweyn ka qaataneefsashadacaraftawanaagsan.
9. Fayraaska HIV.
Waxaa uu ka mid yahay daawooyinka oo u fiican ka hortaga and ka horjoogsashada iskugudbinta fayruska cudurka dilaaga ah ee HIV. Waxaana la ogaaday in Qorfaha uu shaqeeyo sida Daawada HIV loo qaato ee AZT markii uu jirka fayuraska ugu horeeya loo qaato.
Waxaa weli baaris ku socoto ina qorfaha uu u fiican yahay oo daaweeyo cudurka qalalka.
11. Xanuunada maqaarka ku dhaca.
Isticmaal saliida ama qasqas oo qorfaha ah inaad markasato jirka.